Tag: tigidh | Martech Zone
Fahmitaanka NFC: Isgaarsiinta Goobta dhow
Sunday, May 8, 2016 Monday, June 25, 2018 Adam Yar
Muuqaalka moobiilku si isdaba-joog ah ayuu isu beddelayaa, oo kaliya suuqleyda la socda isbeddelada kuna soo daraya istiraatiijiyadooda dhiirrigelinta iyo ka-qaybgalka waxay fursad u leeyihiin inay ku guuleystaan ​​adduunkan maanta ee aadka u tartamaya. Tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee ka dhigtay wax weyn waa Isgaarsiinta Field Field (NFC). Waa maxay Isgaarsiinta Goobta u Dhow? Isgaarsiinta Agagaarka dhow waa tiknoolajiyad ku dhexjirtay aaladihii ugu dambeeyay ee mobilada oo u oggolaanaya wada xiriirka aaminka ah (iyadoo la xaqiijinayo) inta udhaxeysa aaladda moobaylka iyo a
Axad, Sebtembar 30, 2012 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Wareysigayagii aan la yeelanay barnaamijka 'Stormstack' Jimcihii, waxaan ka wada hadlaynay oo keliya sida barnaamijyada waaweyn ay u sii socdaan suuqa kuwaas oo bixiya xalal aan qaali ahayn oo ku kori kara ganacsigaaga. Markii aan qorayay horumariye arrin aan ku haynay qalabkiisa, waxaan galay nidaamka tikidhada ee ay hirgeliyeen, Ticksy. Haddii aad tahay ganacsi koraya, tani waxay noqon kartaa nidaamka kuugu habboon adiga maadaama ay kaa qaadayaan $ 5 keliya
Jimco, Febraayo 8, 2008 Jimco, Febraayo 8, 2008 Douglas Karr
Aad ayaan ugu faraxsanahay Y! Toos - tiknoolajiyad cajiib ah! Marka waxaan go aansaday inaan horay usii socdo oo aan si toos ah ugu dhejiyo dhinaceyga dhinaceyga! Markii aan tabinayo, waxaad arki kartaa anigoo ka shaqeynaya laptop-ka 'ol' midig dhinaceyga dhinaceyga. Sideen ku sameeyay Waxay qaadatay waxoogaa shaqo ah, laakiin waan ogaaday. Caqabada ugu weyn ee ka soo horjeedda waxay ahayd in dukumiintiyada Yahoo! Dukumiintiyadu ay khaldan yihiin URL-ka si loo tilmaamo baahinta dhabta ah!
Jimcahan, waxaan lahaa sharaf inaan ka soo qayb galo kulan aan la yeeshay qaar ka mid ah shirkadaha aadka loo matalo iyo hogaamiyaasha warshadaha maxalliga ah si aan ula shaqeeyo Colts dadaalkooda socda ee ah "Ka dhig mid Shakhsi" taageerayaashooda. Tani waa urur fantastik ah waxayna leeyihiin xushmad weyn. Waxay ka faa'iideysanayaan kheyraad kasta oo ay suurtagal tahay inay gacanta ku dhigaan si ay u hagaajiyaan xiriirka ay la leeyihiin taageerayaashooda, ayna ugu dhowaadaan hay'adda sida